कोरोना संक्रमितको जटिल उपचार महंगो – हाम्रो देश
कोरोना संक्रमितको जटिल उपचार महंगो
बुटवल : लक्षण भएका कोरोना संक्रमितको उपचार निकै महंगो देखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बनाएको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको खर्च निकै महंगो भएको पाइएको हो। संक्रमितमध्ये अधिकांश लक्षण नदेखिएका छन्। लक्षण देखिएका र दीर्घरोगीको उपचार महंगो भएको अस्पतालले जनाएको छ।
उक्त अस्पतालमा अहिले चारजना बिरामी गम्भीर अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। उनीहरूलाई आईसीयूमा राखिएको छ। आईसीयूमै रहेका तीनलाई भने बिहीबार मात्रै सामान्य वार्डमा सारिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालका अनुसार ती बिरामीको उपचारमा दैनिक १ लाख २१ हजार खर्च भएको छ। ‘हिजो (बुधबार) मात्रै मैले सबै हिसाब गरेर हेरें’, उनले भने, ‘जटिल बिरामीको उपचार निकै मंहगो देखिएको छ।’ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), बिरामीपिच्छेका फरक–फरक रोग र त्यसको औषधि, कृत्रिम श्वासप्रश्वास सहितको उपचारमा खर्च भएको हो। बुटवलको अस्पतालमा दैनिक २६ थान पीपीई खर्च हुने गरेको छ। उनले एकै दिन पीपीईमा मात्रै ७०÷८० हजार खर्च हुने गरेको बताए।
जटिल बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सकको अवस्थासमेत कष्टपूर्ण छ। पीपीई लगाएरै ६ घण्टासम्म खटिनु परेको हो। त्यसरी खटिएका चिकित्सकलाई अस्पतालले होटल क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। होटलसमेतको खर्चले उपचार महंगो भइरहेको उनले बताए। विशेष अस्पतालका लागि नै पाँचजना चिकित्सक तोकिएका छन्। दुई जना कन्सल्ट्यान्ट छन्। विशेषज्ञ डाक्टरहरू एक साता सेवामा खटिएर दुई साता क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। अन्य चिकित्सक भने २१ दिन सेवामा खटिएर क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। सो अवधिमा प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल अधिकृतहरूले बिरामीको रेखदेख गर्ने गरेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले बताए।
प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघि भेन्टिलेटरमा राखेका दुईजना कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। भेन्टिलेटरमै पुगेका दुईजना उपचारपछि निको हुँदै गएका छन्। अहिले चारजना गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। एकजना भेन्टिलेटरमा छन्। बिरामी दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तुका हुन्। प्रादेशिक अस्पतालले बुटवल धागो कारखानाको भवनमा आईसीयू अस्पताल बनाएको हो। आठवटा आईसीयूसहित भेन्टिलेटर अस्पतालमा छन्। अहिले अस्पतालमा १७ जना संक्रमित छन्। अन्य ११ जना भने लक्षण देखिए पनि सामान्य अवस्थामा छन्। ‘सामान्य बिरामीको रखेदेखमा खर्च र जटिलता पनि कम छन्, डा. खनाल भन्छन्, ‘जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार महंगो छ। यस्ता बिरामी बढेका छन्, अवस्था जटिल हुने देखिन्छ।’
संक्रमितको अप्रेसन कक्ष
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले संक्रमितको अप्रेसन कक्षसमेत बनाएको छ। जसलाई कोरोनाको तेस्रो तहको उपचार कक्षसमेत भनिन्छ। यस्तो अस्पताल रहेको नेपालगञ्जमा दुईजनाको अप्रेसन गरिएको छ। लुम्बिनी अस्पतालमा भने अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामी भेटिएका छैनन्। विशेषगरी सुत्केरीको अप्रेसनका लागि सो कक्ष तयार गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले बताए।
प्रादेशिक अस्पतालले पीसीआर परीक्षणसमेत आफैं गर्दैछ। मेसिन जडानको काम भइरहेको र केहीदिनमै परीक्षण सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित हुन सक्ने सम्भावनाका बिरामीको उपचारका लागि छुट्टै आकस्मिक कक्ष र आइसोलेनसमेत निर्माण गरिएको छ। कोरोनाका सम्भावितको उपचार गर्न छुट्टै कक्ष निर्माणपछि ओपीडी सेवा चलेको छ।
करिब तीन हजार संक्रमित
प्रदेश नम्बर ५ मा २ हजार ९ सय ५६ जना संक्रमित छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीका अनुसार यीमध्ये १ हजार ५ सय २ जना उपचारमा छन्। १ हजार ३ सय ९२ जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन्। प्रदेशमा मात्रै १० जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। बिहीबार मात्रै ५२ जना संक्रमित थपिएका हुन्। प्रदेशमा चारवटा आइसोलेन अस्पताल छन्। यी अस्पतालमा ९४ जना उपचाररत छन्। तीमध्ये ७ जना जटिल प्रकृतिका छन्। अन्य ८७ जना लक्षण देखिएका तर सामान्य बेडमै उपचाररत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशभर १७ हजार ९१ जना क्वारेन्टाइनमा छन्। ७ हजार २ सय १९ जनाको स्वाव परीक्षणका लागि ल्याबमै थन्किएको छ।